Kutheni iGokai -Shanghai Gokai Industry Co., Ltd.
Inkampani iShanghai Gokai Co, LTD.
Umenzi wobuchule webhodi kunye nephepha
I-Shanghai Gokai Industry Co., Ltd. ixhomekeke ekuphandeni, ekuphuhliseni, ekuveliseni ibhodi ye-foam ye-PVC, i-Acrylic Sheet ikakhulu. Inkampani yasekwa ngo-2009, kukho iifektri ezi-2, imigca yemveliso eli-10, ikomkhulu lalapha eShanghai, China. Sazisa izixhobo zokuqhubela phambili kunye netekhnoloji yokuqhubekeka, ikwangumatshini okhokelela kwihlabathi kunye namava atyebileyo ngale nkqubo. Zonke ezi zinto zenza ukuba iGokai ivelise ibhodi ye-foam ye-PVC, iphepha le-acrylic, ngomgangatho ophezulu. Ihambelana ngokugqibeleleyo neemfuno zentengiso.
Iimveliso zethu ikakhulu zithunyelwa, ezifana Argentina, Brazil, Canada, Nigeria, Mexico, Saudi Arabia, UAE, UK, USA, Malaysia, Thailand, Vietnam, Spain, Romania, Algeria kwihlabathi liphela. Sikwababoneleli abaPhicothiweyo beSGS. Kwaye sidlula isiqinisekiso se-CE. Sigxila kumgangatho wokuba samkele ngokungqongqo iindlela zolawulo lomgangatho wokuhlola ukuze kuqinisekiswe ukuthembeka komgangatho wemveliso.
I-Gokai yeBhodi yeGwebu yePVC:
Sibonelela ngebhodi ye-foam ye-PVC yentengiso, izinto zokwakha ibhodi ye-foam ye-PVC, ifanitshala yefenitshala yePVC. Ubunzima be-1mm ukuya kwi-30mm. Iimveliso zethu ezisetyenziswa ngokubanzi kwifenitshala, intengiso, izinto zokwakha, umhombiso kunye nokusetyenziswa kwemizi-mveliso kunye nezinye iinkalo.
Kwakhona kwathiwa igama lephepha leplexiglass. Sinikezela iphepha le-acrylic Cast kunye nephepha le-acrylic elingaphandle, iphepha le-Acrylic Mirror, i-Acrylic Light Guide Sheet, iphepha le-Acrylic elisetyenziswa ikakhulu kwintengiso, ukukhanyisa, ukwakha ishishini, ukrolo, ukuhombisa kunye nakwibhafu, igumbi lokuhlambela. Ubukhulu 1-500mm. Inkqubo yokuqhubela phambili yokuqinisekisa ukuba iphepha le-acrylic linobungqongqo obugqwesileyo, amandla kunye nokuchasana kweekhemikhali.
Imigca yemveliso eli-10, 1 * 20GP malunga neentsuku ezili-10 ukugqiba, 1 * 40GP malunga neentsuku ezili-15 ukugqiba.
Sinabasebenzi abangama-200, iinjineli zobugcisa ezingaphezu kwama-20 kunye nama-80% kubo abanesidanga sokuqala.
Impahla eluhlaza yi-100% eyintombi.
Iphakheji yokuthumela ngaphandle kunye nekhabhinethi ekhethekileyo.
Ibhodi ye-foam ye-PVC isebenzisa ibhegi yeplastiki ngoonogada beekona, okanye ibhokisi yebhokisi kunye nepallet yomthi.
Ingxowa yeplastikhi enonogada bekona
Pallet iinkuni Rhweba ngaphandle
Ukufaka isikhongozeli sebhegi yePlatic
Ukufaka ibhokisi yebhokisi yeCarton
Ukufaka isikhongozeli pallet iinkuni
Iphepha le-acrylic lisebenzisa ifilimu ye-PE okanye iphepha lekraft, emva koko lisetyenzisile ipallet.
Amacala amabini e-PE ifilimu okanye iphepha lekraft
Ubukhulu ngentando kunye nezinyuko kunye nombala ziyafumaneka. Wamkelekile ukwabelana ngombono wakho nathi, masisebenze kunye ukwenza ubomi bube nokuyila ngakumbi.
IQELA LEGOKAI NENKCUBEKO YABASEBENZI
Iinkampani zihambelana nokuthembeka kwelitye lembombo, umgangatho wokuphila, isayensi kunye nezinto ezintsha zetekhnoloji njengamandla okuqhuba, ukufuna ukugqwesa, ukudala umgangatho obalaseleyo. Sizimisele ukusebenzisana ngokunyanisekileyo nabathengi ekhaya nakumazwe aphesheya ukuze sihambisane namaxesha kwaye senze ubuqaqawuli kunye.
UGokai uhlala ehambelana nomgaqo, ojolise ebantwini, kulawulo lwengqibelelo, umgangatho ophezulu, udumo lweprimiyamu.
Ukuyilwa kwezinto yinto ephambili yenkcubeko yeGokai.
Izinto ezintsha zakhokelela kuphuhliso, ezikhokelela kukonyuka kwamandla, Zonke zivela kwizinto ezintsha.
Uxanduva lwenza ukuba umntu anyamezele.
IGokai inoluvo olomeleleyo loxanduva kunye nomsebenzi kubathengi nakuluntu.
Ibihleli ingamandla aqhubela phambili uphuhliso lweGokai.
Intsebenziswano ingumthombo wophuhliso.
Sebenzani kunye ukudala imeko yokuphumelela ithathwa njengeyona njongo ibalulekileyo kuphuhliso lweshishini.
Ngokwenza intsebenziswano ngokugqibeleleyo,
GOKAI LABAXHASI NOKUVAVANYA
Undwendwelo loMthengi Umboniso weGokai
PVC amagwebu ibhodi yomyalelo: 5 Star
Iphepha le-acrylic yomyalelo: 5 Star